Sida loo xidid Galaxy Tab 2 7.0 P3100 / P3110 / P3113 Isticmaalka CF-Auto-Root
Tutorial Tani waxaa kaliya loogu talagalay qalabka hoos ku qoran:
Haddii aanad isticmaalin wax kasta oo iyaga ka mid ah, hana raacina hagahan si rujin qalab aad. Mise dhaawacmi doonaa. Just raadiyo hage kale oo ku haboon, waxaa ka.
Hubi hor inta aanad bilaabin,
1) Waxaad wax ka badan 80% batteriga qalabka aad.
2) Waxaad xoojiyaa xogta muhiim ah oo ku saabsan qalab aad.
3) Waxaad ku aqbali rooting in ka tirtiri doonaa damaanad.
Qalabka Download hanaanka rooting ah
1. Download xirmo CF-Auto-Root hoose qalab aad.
CF-Auto-Root-espressorf-espressorfxx-gtp3100.zip (for P3100) CF-Auto-Root-espressowifi-espressowifiue-gtp3113.zip (for P3113) CF-Auto-Root-espressowifi-espressowifixx-gtp3110.zip (for P3110 ) 2. Download Odin3
Tallaabada 1. Waraaqda file CF-Auto-Root iyo aad arki doonaa file .tar ah. Daa oo taga si aad tallaabada xigta.
Tallaabada 2. Waraaqda file Odin3 ah, ka dibna waxaad arki doonaa file a .exe. Double guji si ay u maamulaan on your computer.
Tallaabada 3. Sax off sanduuqa horteeda PDA ee suuqa kala ah Odin3, ka dibna dhirtuba ay doortaan file .tar ah oo ku shuban in.
Tallaabada 4. Markaas ka fiiri sanduuq Auto-reboot iyo F.Reset Time , tagayo Dib-u-Barzakh sanduuqa laga qaban.
Tallaabada 5. Hadda Demi qalab aad. Markaas riix Power + Down Volume badhamada wada qiyaastii dhowr ilbiriqsi ilaa aad ka aragto fariin digniin muuqashada shaashadda, ka dibna riix Volume Down button. Sug ilaa qalab aad waxaa howleheedii in hab Download.
Tallaabada 6. Ka qalab aad ku xiran computer la cable USB ah. Marka Odin3 helo qalab aad, aad arki doonaa dekedda jaale-iftiimiyay hoos ID ah: COM. Markaas horay u socdo.
Fiiro gaar ah: Haddii aydaan arkayn dekedda yellow-iftiimiyay, waa in aad unstall wadayaasha USB u qalab aad ka (Waxaad karo waxaa halkan kala soo bixi ).
Tallaabada 7. Riix ah Start button in Odin3 ay u bilaabaan soo afjarno qalab aad hadda. Ha barkinta qalab aad markii ay hawshan socotay. Waxa aad ku kici doona in yar. Marka la dhameeyo, waxa aad ka arki kartaa PASS! fariin ku saabsan suuqa kala. Markaas qalab aad bilaabi doonaa ahaantiisa, iyo habka rooting oo dhan waa in ka badan. Waxaad tahay oo lacag la'aan ah si ay u sameeyaan wax kasta oo aad haatan doonayaa.
Sida loo xidid Galaxy S GT-I9000 la Android 2.3.6 XXJVU firmware
Qaamuus Terms soo afjarno
Best 8 Root Tools Android inay Hel Root Access leh ama aan lahayn Computer
Marka la eego 6 afjarno Halista inta aanad Tallaabooyinka
Habka ugu fiican ee xididka Samsung Galaxy Ace S5830
Sida loo xididka Samsung Galaxy Gio S5660
> Resource > Talooyin Root > Sida loo xidid Galaxy Tab 2 7.0 P3100 / P3110 / P3113 Isticmaalka CF-Auto-Root